Musharraxii Soo Shaqa tagay iyo waayihiisii nololeed – Maandoon
November 24, 2016 January 3, 2017 Cabdullaahi Muuse 0 Comment
Sugulle waxa uu dhasahay nuskii danbe ee qarnigii 20aad. Waxa uuna ku dhashay Rays-dheer. Rays-dheer waa tuulo aad u yar oo reerahoodu degijireen, walow ay aad u yarayd haddana waxa ay ahayd mid aad u camiran markii la barbardhigo tuulooyinkii iyada ku hareeraysnaa. Waxa ay lahayd dugsi quraan. Iskuuul lagama aqoon. Caruuruhu quraan kaliya bay baran jireen, goortii ay dhameeyaan baa loo dhigi jiray magaaloyinka u dhow si ay iskuul u galaan . Dhaq dhaqaaqa dhaqaale ee tuulada ka jira mid saa ubuuran ma ahayn. Tuulada taladeedu waxa ay ka godaa dhowr oday iyo Macallin Cali. Cali waa macalinka tuulada sidoo kale waxa uu kitaabo ka mariyaa mawlac ku yaal tuulada. Waa buuni diita Islaamka aqoon dheer u leh. Reer Rays-dheer iyo tuulo u dhow reero degi jiray baa intaa islayn jiray, maaro loo kala waa. Dhul daaqsimeed bay fidnadu ka kacday, haddase farihii waa ay ka baxday. Labaataneeyo sano bay dirirtu socotaa. Wixii waan-waan nabadeed iyo mag kala qaadasho ah ama hurin colaadeed iyo ciidan abaabulid ah odayashaa horbooda. Alla-bariyada iyo roobdoonta na macallin Cali baa hormuud ka ahaa.
Masjidkii bakhaarka noqday:
Sugulle waxa uu u waynyahay caruur walaalo ah oo shan ka kooban, saddex wiil iyo gabar. Aabihiis waxaa la yiraahdaa Salaad Samatar. Salaad waa oday maalqabeen ah, waxa uuna ku jiraa saddexda nin ee tuulada maciishadda keena. Bartamaha magaalada waxaa uu ku leeyahay Salaad bakhaar aad u wayn . Dhisamaha uu bakhaarku yahay imminka markii hore loogu ma talo galin inuu bakhaar noqdo. Oo Maxaa loogu talo galay dee? Waxaa loogu talagalay inuu noqdo masjidkii ugu horeeyay ee tuuladu yeelato. Oo waa ayo cidda baas oo baydkii ilaahay bakhaarka ka dhigtay caro ha ku dhacdee?
Waxa ay ahayd xilli barqo ah Salaadna uu joogay gurigiisa markii uu u soo galay wiil yar oo uu dhalay oo markaas meheradaha tuulada ka soo noqday, wiilkii yaraa waxa uu aabihii u sheegay inuu meheraddii Ina qoobdheere ku soo arkay adeer Baaruud. Baaruud waa Salaad ina adeerkii rumaad. Baaruud waxaa uu degganyahay isagu miyi, halkaas oo ay u deggan yihiin saddex reerood. Baaruud waxa uu dhalay 26 caruur ah, waa sideed iyo toban wiil iyo sideed gabdhood. Baaruud waa oday aad iyo aad u geel badan, kadimo geela ayuu leeyahay. Baruud mar waa oday nabad-doon ah marna waa colaad-doon,waa dagaalyahan aan boqol nin biyo u kabban, waa nin magaciisu gaaray meel uu qudhiisu tagin. Waxa ay ahayd dhowr gu ka hor markii uu guluf ku ekeeyay geelleey degaankoodii ka soo hayaamay. Baaruud waxa ka feer dagaalamayay markaas toban wiil oo uu dhalay. gulufkaas waxa ay kusoo dhaceen geel aad u farabadan, taasoo ka dhigaysa geela Baaruud kala bar wax ka badan inuu yahay xaaraan iyo wax dhac iyo boob lagu keenay. Baaruud iyo inta la ayniga ah waxa ay aaminsanyihiin kuna dhaqmaan qaaciido ab ka soo gaar ah Xalaal iyo xoog hadduu xero galo midna kuuma xuma
Baaruud hadda dadiisu waa 80 jir, waa uu tabaryareeyay araggiina marba marka kasii danbaysa waa uu soo daciifayay, waxa uu hubsaday inuu yahay gabbal sii dhacaya. Baaruud waxa uu goaan saday inta cimrigiisa ka dhiman inuu cibaadada daaimo, wehelna uu ka dhigto tusbaxa iyo ubbada weesada. Sidoo kale waxa uu goaan ku gaaray inuu geeliisa sakada ka bixiyo sannadkaan iyo sannadaha soo socdaba, waxa kale oo uu goostay inuu masaajidkii ugu horreeyay ka dhiso Rays-dheer. Masjid dhisidda aad bay u soo dhaweeyeen dadkii tuulada degganaa. Intaas waxii ka danbeeyay Baaruud waxa uu ku noqday xaafadihii miyi, goaankii uu qaatayna waxa uu u sheegay wiilashiisii, walow ay soo dhaweeyeen dhamaan goaankii aabahooda haddana qaar baa ku gacan saraysay masjid dhisadda. Isjiijiid badan kadib odaygii waxa uu geelii kasoo soocay boqol neef si loo bilaabo dhisadda masjidkii uu balanqaaday.
Baaruud iyo saddex wiil oo uu dhalay waxa ay geelii keeneen tuuladii, nasiib wanaag tuulada baryahaas waxaa joogay qolooyin xoolaha gata dabadeedna lacag qaaliya ku sii gada. Labo maalmood kadib oday Baaruud waxaa laga gatay sagaashan ka mid ah geeliisii, sidoo kale dhismihii masjidka waxaa la bilaabay asbuuc ka dib. Markii hore waxaa la taagay daarwayn, dabadeed waxaa loo yeelay mixraamkii, toban daaqadood iyo afar albaab. Goobta laga dhisay masjidka waa bartamaha magaalada waa goob dadkoo dhan u siman, waa meel meherado badani ku yaalaan waana goobtii ku haboonayd in laga dhiso masjid. Hawshii masjidka oo si habsami ah u socota, kaliyana ay dhimantahay in dad/saanqaaf la saaro lana cagdhigo, ayaa tuulada waxaa yimid shiikhul baladkii oo baryahaas ka maqnaa tuulada, wadaadkii waxaa loo sheegay in masjidkaan uu dhisayo ninkii Baaruud ahaa. Ma Baaruud baa dhisaya?! Wadaadkii waxa uu u tagay Baaruud si uu uga waraysto masjidka iyo hawlihiisa. Is waraysi kadib wadaadkii waxa uu waydiiyay Baaruud halka uu ka keenay xoolaha uu masjidka ku dhisayo ? Baaruud waxaa uu shiikhul baladkii u sheegay in uu geeliisii qaar gaday, wadaadkii oo la kaftamaya Baaruud waxa uu yiri War geelu soo kii aad xabadda kusoo xero galisay maaha? Haa. Intaas kadib wadaadkii waxa uu Baaruud u sheegay in xoolahaas aan laga dhisi karin masjid iyo inuu halkaa ku joojiyo dhisadda masjidka. Baaruud waxa uu joojiyay masjidkii, aqalka intii dhisnaydna waxa uu ku wareejiyay ina adeerkii Salaad, isagiina waxa uu isaga noqday baadiyihiisii. Salaad dhismihii waxa uu ka dhigtay bakhaar aad u wayn oo uu u labaxay Baahi biiye. dadkii oo aad uga xumaaday joojinta masjidka, waxa ay carada kula dhici jireen Salaad Samatar. Waxa ay ku oran jireen Masjid baad bakhaar ka dhigtay, balaayo iyo baas baa kugu dhici doonta. Waayadii danbana waxaa Salaad naanays u noqotay Masjid biiye, magacaas oo uu aad uga xanaaqi jiray markuu maqlo,waxa uuna wacad ku mari jiray qofkii ugu yeera magacaas inuusan waa danbe wax ka gadayn. Si kasta oo uu u diido naanaystaa waa ay u hir gashay, dadkuna magaciisii runta ahaa waaba ay illaaween, haddaad maantoo dhan ku haysid war Salaad Samatar yaa arkay. Cidina juuq kuu dhihi mayso, dadka waawayni waa laga yaabaa inay ku dhahaan war Masjid biiye halkaas buu bakhaar ku haystaa.
Rays-dheer oo cidla noqotay
Muddo ka dib tuuladii Rays-dheer waxa ka dhacay abaaro baan iyo colaado is daba joog ah, dadkii tuuladuna marba marka ka sii danbaysa waa ay sii yaraanayeen, waxa ay u guurayeen magaalooyinkii u dhawaa, tobaneeyo sano oo dadku ku sii qulqulayay magaalooyinka, colaaduna soo laalaabanaysay tuuladii waxaa kusoo haray dhowr qoys oo ay ku jiraan reer Masjid biiye. Waa xilli barqo ah, Salaad Samatar waxa uu dhex fadhiyaa bakhaarkiisii, waxa uu labadiisa gacmood ku hayaa dhafoorada. Waxa uu la yaaban yahay tuuladii dad iyo duunyaba camirnaan jirtay sida looga yaacay, waxa uu u qaadan layahay sida bakhaarkiisii la is daba tubnaan jiray ee saddexda qof gadi jirtay masiibadu ugu habsatay. Waa maalinkii labaad oo aan tummun sonkor ah xitaa laga gadan. Waxaa xasuustiisa kusoo laa laabanaya maalin uu laba nin oo midi doonayay kiish gelleey ah midka kalana uu doonayay haaf sonkor ah uu eryay, kadib markii ay ugu yeereen naanaystii uu ka xanaaqi jiray ee Masjid biiye.
Waxa uu fiirinayaa dhowr kiish oo bariis ah oo in muddo ah meel ku tiirsanaa, waxaa uu ku cel-celinayaa Magacaa rabtaan iigu yeeroo, kaalaya mar un wax iga gata. Magacaa rabtaan iigu yeeroo kaalaya mar un wax iga gata. Intaas isagoo ku cel-celinaya waxaa u soo gashay xaaskiisii Dhudi, waxay ku tiri Xaaji maanta waa adigaan isla hadlayee maxaa ku helay intuu sidii wax hurdo ka soo salalay madaxa kor u soo qaaday ayuu yiri Mayee is la hadli mayee xoogaa un baan yara fakarayay. Gabbalkii maalintaas waxa uu dhacay isagoo aan waxba laga gadan, wuuna iska carraabay, intii uu waddada sii socday marna madaxiisa kor uma uusan qaadin hoos un buu fiirinayaa, waa uu fakaryaa oo madaxuu ruxayaa mar mar, waxa uu soo xasuusanayaa maalmo wacnaa oo ganacsigiisa soo maray; maalmo gaari raashin iyo badeecooyin kale ku raranyihiin galab gaabkii magaalada intuu soo galo la oran jiray Gaarigaas waxa uu u yimid Masjid biiye oo berri baa rarka laga dajinayaa. Habeenka ka horeeya subaxa rarka la dajinayo xaafadda Masjid biiye waxa ay ahaan jirtay sida meel Alla bari ka jiro dadku waa dhoobnaan jireen. Dadku waa mid le Aniga laba kiishoo bariis ah meel ii sii dhig Anigana lacagtaan qadimayaaye loor bur ah meel iigu tiri yaan la iga dhamaysanee. Waa xaal adduune caawa xaafada waxa uu yimid isagoo maanta hal shay xitaa aan laga gor-gorin. Fiidkii markii ay ahayd buu u yeeray curadkiisii Sugulle iyo xaaskiisii Dhudi waxa uu uga warramay xaalka tuulada iyo suuq xumada ka jirta, iyo in dhowr qoys maahee tuulada laga wada guuray. Waxa kale oo uu u sheegay in ay isbuuc kadib ay raaci doonaan gaari caano kasoo qaadi jiray tuulo yaroo ka shishaysay oo ay ku gaari doonaan magaalada u soo xigta magaalooyinka dabadeedna ay u sii gudbidoonaan magaalada Xamar halkaas oo ay degi doonaan. Sidii balantu ahayd isbuuc ka dib bay ka dhaqaajiyeen tuuladoodii ay sannadaha badan ku noolaayeen, waxay ayna tageen meel magaalo ah oo ay ka bixi jireen gawaarida Xamar aadda.
Sugulle iyo waayihiisii Muqdisho
Waa rubucii danbe ee qarnigii 20aad, Goobta ay yimaadeen waa magaalo, haa waa magaalo oo tuuladoodii waxyaabo aysan ku arki jirin bay halkaan ugu yimaadeen. Haddii markii ay tuuladooda joogeen bishii hal mar ay gaari arki jireen halkaan gaarigu wado walbuu yaacayaa; haddii habeenkii ay faynuus shidan jireen markii naaftada la waayo ama liifadu dhamaatana gurigu mugdi ahaan jiray, xaafaddaan ay joogaan habeen walba waxbaa ka ifa meel laamiyeeriga wax yar un ka sokaysa. Nal baa layiraahdaa baa lagu yiri. Reer Masjid biiye haddiiba ay magaaladii joogeen muddo laba isbuuc ah, waxa ay u diyaar garoobeen inay safarkooda sii wataan ilaa iyo halkii yoolkoodu ahaa. Xilligu waa subax hore waxa ayna taagan yihiin astaankii gawaarida Xamar u bixi jirtay. Gaariga ay raacayaan waa Siisow, dadka inta badan dumar iyo ragba kor baa la koraa. Hadda waxaa kor u hadlaya darawalkii, waxa uu leeyahay Halla soo fuulo gaariga waa la baxayaaye. Dadkii waxa ay bilaabeen inay ka soo kacaan meheradihii ay shaaxa ku cabayeen, gaarigii bayna wada fuuleen. Waxa u bilowday safar dheer, waxa ay u socdaan magaalo uu ku riyoodo qof walba oo Soomaali ah inuu dego ama mar un uu tago, haddii uusan degitaanka awoodinna inuu mar un tago. Habeenno iyo maalmo ay jidka ku jireen ugu danbays waxa ay tageen magaaladii Muqdisho.
Reer Masjid biiye si wanaagsan bay u fahmeen magaaladii, caruurtiina waxbarasho baa la geeyay. Waxa ay maalmuhu is daba maraan; habeenaduna is dhaaf-dhaafaan; biluhuna is eryadaan; sannaduhuna ay sanka isku hayaan; ninkii Sugulle ahaa maanta waa nin isku filan. Dhanka waxbarashada ilaa heer jaamacadeed buu ka gaaray, shaqo waanaagsan waa uu haystaa, oo waxa uu u shaqeeyaa wasaaradda beeraha. Waa isaga cidda reerka biisha hadda, oo odaygii Salaad Samatar ah dhowr sano ka hor buu madaxa laabay. Sugulle waxa uu ku jiraa maalmihiisa ugu wacnaa nolosha. Balse waxa ay yiraahdaan Si jirta siima jirto , oo isbaddal inuu dhaco waa qaaciidooyinka ay ku dhisantahay noloshu. Sanadku waa 1990, magaalada Muqdisho iyo dhamaan wadanka waxaa laga dareemayaa xasilooni darro. Waxaa sii liicaya nidaamkii dawladnimo ee waddanka ka jiray. Sugulle laba bilood mushaar ma qaadan, oo miyaa la waayay wax shaqaalaha la siiyo? Mayee lama wayinee dhexdaa lagu kala goostay mushaarkii shaqaalaha. Sanad ka dib waxaa afka ciidda darsatay dawladii uu u shaqayn jiray Sugulle, wadankiina waxaa uu noqday dawlad laaan, fawdo iyo dagaallo sokeeye oo markaa bilowday. Sugulle oo subax hor fadhiya gurigiisii xabadduna si aan innaba caadi ahayn ay magaalada uga dhacayso ayaa waxaa u yimid Faarax oo ay daris ahaayeen muddo dheer. Faarax waxa uu ku yiri Waxa aan doonayaa maanta inaan magaalada isaga qaxo, oo inta xabaddu joogsanayso aan bal tuulooyinka caruurta u saaro, adigu miyaadan xabadda ka baxayn? Sugulle oo aad uga fakaraya xaaladda uu wadanku ku jiro iyo meesha uu u sii socdo ayaa jaalihiisii ugu warceliyay Ninyahow saad wax moodayso ma aha, saansaanka magaaladaan ka muuqda ma wanaagsana, ee kollayba haddii aad qaxaysid waxa aad aadaa gobolada ay reerkiinu degaan. Tan kale anigu waxa aan doonaya inaan wadanka gebigiisaba isaga qaxo, oo halkaas iyo Yaman iyo dhul carbeed baan afka saarayaa, hadde nabad gelyo iyo nooli kulantee.
Safaradii Sugulle ee Yaman, Suuriya ilaa Ingiriiska
Waa xilli habeen ah, mayee habeen keliya maahee wa saqdii dhexe. Sugulle waxa uu ku jiifaa joodari dhex yaal qol mugdi uu dhan walba ka xigo. Qadaad qadaad buu u jiifa, indhihiisuna sida qof wax daawanaya bay sanqaaf mugdi ka sokeeyo ku fooganyihiin. Waa uu fakarayaa oo fakarayaa¦ oo muxuu u fakari waayay soo nin berri socdaal qaarado la isaga gooshidoono geleya maaha. Waa hiirtii waa bari, waa maalin cusub. Sugulle si walba waa uu u diyaarsanyahay oo isbuuc muddo ku dhow buu tabaabushe ku jiray kaliya saaka waxaa uu sugayaa waa baabuurkii u qaadi lahaa magalaada Boosaaso. Waxa uu fadhiyaa meherad shaaxa laga cabo, una dhow astaankii uu gaariga ka raaci lahaa. Dadku waxa kaliya oo ay ka sheekaynayaan waa dagaal lagu hoobtay oo shalay casar gaabkii magaalada ka dhacay Labaatan baa laga dilay; afartanna waa laga dhaawacay; laba gaarina waa laga qabsaday. Waa maqane jooge, cidna la uu hadli maayo, labadiisa indhood waxa ay ku maqanyihiin oday hadalkaa kore yiri oo ka mid ahaa dadkii shalay dagaalka ku jiray. Cabbaar yar kadib waxaa u yimid kariishbooygii oo ku wargaliyay in isaga kaliya la sugayo, isna waa uu raacay. Gaarigii waa uu dhaqaaqay, waxaa bilowday safar dheer, dherer kaliya maahee waxaa aad looga baqanayaa mooryaanta isbaarooyinka dhigata. Waa dad irsaaqadoodii ay halkaas gashay. Haddii ay lacag ka waayaan darawalka waa dilid. Ilaah bari badan iyo sadaqo badan ka dib, ugu danbayn waxa ay yimaadeen magaaladii Boosaaso. Sugulle haddii uu gaarigiiba ka degay waxa uu afka saaray dhankaas iyo xeebta. Dad baa joogay makhaayado xeebta u dhow, wiil ka mid ahaa dadkaas meesha joogay buu uga warramay safarkiisa iyo waxa uu damacsanyahay iyo in la helayo wax dooni ah oo Yaman u socota iyo in kale. Wiilkii baa ku yiri War ninyahow waxaa tahay nin hoodo iyo ayaan badan, caawa bayna baxaysaa dooni dad wadda, ninka doonida lihina waa isaga halkaa fadhiyee lacagta un iska bixi. Sugulle oo wajigiisa ay ka muuqato naruuro iyo naxariis badan ayaa ninkii loo tilmaamay u tagay deetana lacagtii bixiyay. Waxay ku balameen galabta inuu halkaan iskeeno oo la bixi doono.
Doontii waxa ay ka shiraacatay xeebtii Boosaasood abbaare 11:30 habeennimo. Doonta waxaa saaran afar boqol oo ruux, caruur iyo haween bay u badanyihiin. Doonidii waxa ay muquuratay bad-wayntii. Naakhuuduhu waa nin bad-maax ah, oo dhaqan iyo hidde-ba u leh xirfadda naakhuude-nimo. Muddo labo saac markii ay ku jireen bad-wayn mugdi iyo mowjado badan; dabaylo iyo roobabna ay u dheeryihiin, nakhaaduhii waxaa ka luntay jihadii. Naakhuuduhu waxa uu isku dayayaa inuu dadka ka qariyo in jaahii iyo jihadiiba ka lumeen, waxa uu ka baqayaa haddii uu mushkiladda soo korodhay la wadaago rakaabka in caruurta iyo haweenku baqdaan deetana dhibaato intaa ka wayn meesha ka dhacdo. Waaberigii waxa uu u sheegay rakaabkii in ay jihadii ay ka lumiyeen roobabkii iyo dabaylihii xalay. Dadkiina waxaa soo food saartay walwal iyo walbahaar. Hadda waa maalintii afraad oo ay badda saaranyihiin. Kala bar wax ka bandanna dadkii waxa ay u dhinteen oon iyo gaajo. Dadku waxa ay cunayeen maryaha sida duruucda shiidka/baatiga ah iyo macawsaha jilicsan intay biyaha ku radiyaan. Maalinimadii shanaad xilli casar liiq ah bay soo gaareen xeebihii Yaman. Isla goortii ay soo gaareen xeebtii Yaman waxaa qabqabtay askar goobta ku diyaarsanayd oo qaxootiga Soomaaliya ka soo qul-qulaya inuu xeradii Mukalla geeyo loogu tala galay si aysan wadanka gudaha ugu soo galin.
Sugulle haddiiba uu muddo labo bilood ah ku sugnaa xeradii Mukalla, waxa uu u kicitamay halkaas iyo Cadan. Sugulle waxa uu Cadan ka helay shaqo macallinnimo. Waa bare luqadda Ingiriiska ka dhiga dugsiyada sare. Haddii uu muddo labo sano ah joogay Cadan, wax xoogey kharash ahna u aruureen waxa uu isku sii daayay magaalo madaxdii Suuriya ee Dimishiq. Markii uu tagay Dimishiq noloshii waa ay ku adkaatay, wax shaqo ah ma uu hayo, koobka shaaxa ah shilin uu leeyahay kama bixiyee shaxaad buu ku caabba, hooyga iyo hungurigana waxa uu ka helaa oo uu dulsaar ku yahay reero ay qaraabo fog yihiin. Waa uu seexdaa oo soo toosaa, wakhti uma xisaabsana, maalmuhu waa isaga dhex yaacsanyihiin oo jimcaha waxaa ugu xiga jimce kale inta u dhaxaysana ma uu garto gooray dhaafeen, jumcahaasna ma uu garteenee salaaddaa la tukado iyo khudbaddaa un buu ku gartaa.
Sugulle hawsha ugu wayn ee uu hayo maalinwaynta oo dhan waa inuu xilliga barqadii tago makhaayad nin carab ahi leeyahay oo la yiraahdo Nayruus. Waa makhaayad wayn oo wayn waxa ay leedahay barando aad u wayn waxaa isugu yimaada dadyow kala duwan, baryahaanse Soomaalida oo kaliya bay ciriir ku tahay. Goobta cidda joogta waa rag un. Goobtaan waxaa lagu falanqeeyaa laguna lafa guraa arimo dhoof ku saabsan. Saddex waddan un bay inta badan ka sheekaystaan, waa Ingiriiska, Canada iyo Maraykanka. Mid kastoo ka mid ahi waxa uu u xayd-xaydanyahay xoog ama xeelad hadba kii ufudud inuu ku tago dalal kaas mid un. Koox koox bay u fadhiyaan, waa ay buuqayaan oo alalaasayaan, iyaga se waxa ay la tahay inay si caadi ah u sheekaysanayaan. Tiro dhowr jeer ah baa boolisku meesha ku soo leexday iyagoo u qaba meesha inuu shil ka dhacay, markastana ninka makhaayadda lihi waxa uu ku qancinayay inay dadkaan sidaas u sheekaystaan. Hebel baasaboor bug ah buu ku galay Ingiriiska. Waxaa laga soo celiyay garoonka diyaaradaha ee Frankfurt oo diyaaraduu saarnaa baa taraansit ku ahayd, Alla nasiib xumaa wuxu. Anuu xalay ila soo hadloo sharcigii waynaa bil kadib buu qaadanayaa, sanadka cusubna waxa uu kaxaysanayaa reerkiisii oo xeryaha Kenya ku jira. Intaas waa hadallo goos goos ah oo laga dhex maqli karo buuqa iyo hugunka halkaas ka baxaya.
Waa meerto maalmaha aduunkuye, maamulka Alloo jira mar way ku silciyaan marna way ku saacidaan. Sugulle maanta waa xidigga kaliya ee ifaya, waxaa u soo baxay layn Ingiriis-ka ah oo gabar abtigii dhalay baa u dacwootay. waxa uu fadhiyaa barandadii wayneed ee makhaayadda. Waa lagu hareeraysan yahay sida ruux bukoo quraan lagu akhrinyo. Suaalo ciidda iyo camaarkaa ka badan baa la cabsiinayaa. Yaa kuu dacwooday? Goormaa baxaysa oo dal-ku-galkii ma kuu soo baxday? Gabadha ma la qabaa kuu dacwootay? Haddii waayadii hore aamusnaan jiray, qofka hadlayana uu indhaha ka fiirsan jiray, maanta waa uu hadlayaa, haa waa uu hadlayaa oo kaftamayaa, mar waa uu qoslayaa oo duryaamayaa. Nin baa kula kaftamay War heedhe Sugulle illaa ninyahow fool baa kaa maqan , Alla ogee maanta ka hor ma arag. Maasha la yiri: Af daboolan waa dahab. Waxa uu gacanta bidix ku haystaa koob casiir ah oo dhamaad ku dhow, intii u danbaysay buu sii fiiqsanayaa. Waxa uu fiirinyaa dhisme in cabbaar ah u jira oo shan dabakh ka kooban , waa halka ay safaaradda Ingiriis-ku ka ga taal magaalada Dimishiq, waxa u muuqday calankii Ingiriis-ka oo babanaya, waa uu dhoola cadeeyay oo aduunyo kaluu ka fakaraya, qalfooftiisu makhaayaadda Nayruus bay joogtaa, qalbigiisuna wadooyinkii London buu dhex mushaaxayaa. Raggii la fadhiyay qaar waa ay yaaban yihiin, qaarna dulqaadkii baa ka dhamaadayoo waxa ay lee yihiin War maa nala hadashid oo waydiimaha nooga war-celisid. Dhankoodii buu u soo jeestay isagoo aad moodid ruux soo salalay. Waxa uu ku yii Haa haa… war nimanyahow aan idiin warramo, gabar abtigay dhalay oo Shan-karoon layiraahdo hadde waa shan! Labo iyo saddex toonna maaha baa ii dacwootay, dacwadiina waa laga aqbalay. Bil kadib dal-ku-galkii bay ii dalabtay, isna soo heshay, aniguna berri baan tigidkii raadsanayaa. Bisha lixdeedana waan baxayaa, magaalada Rome ee Italy baan taraansit ku sii ahay. Midi wataa. Waxaa kuu soo haray soomaaha gabadha ma la qabaa? War nimanyahow gabadha lama qabo kow dhaha, dee anaa doonaya inaan isku meeleeyo markaan baryo joogo meesha waxna ii baxaan. Sugulle maalintaas isagaa qaba ragga shaaxooda iyo sharaabkooda. Waa xeer jira oo hadba ninkii wakhtiga iyo waayuhu saacidaan baa ragga ka farxiya. sidoo kale waxa uu niyoonayaa Safar salaama iyo in ilaahay ka nabad galiyo isha aadanaha aan libinta isu ogolayn iyo Hiqda asxaabtii ay waayaha aduunku ka hiiliyeen.
Asbuuc kadib sugulle waxa uu yimid London, waxaa si qiimo iyo qaayo le u soo dhawaysay ina abtidii Shan-karoon. Dhowr bilood ka dib waa ay is guursdeen ina abtidii. Sugulle muddo sannad ah waxa uu raadinayaa shaqo xafiiseed, dhowr arji oo uu qortay waa loo qalbi qaboojiyay Annagaa kula soo xiriiri donna. Baa lagu yiri. Illa iyo hadda cid la soo xiriitay majidho, asna waa uu quustay. Waxa uu ku tashaday inuu muruqiisa maalo. Gaari ay gabadhu leedahay buu ku shaqo bilaay. Taksiile weeye sugulle hadda. Waxa uu aad u jecel yahay dadka Cadaan ka ah inuu qaado, Soomaalida markuu qaado waa ay isku harraadaan Lacagta wax iga dhin. Hadda lacag ma wato berri baan isku kaa siinayaa. War ii istaaji gaariga ninkaas baan salaamayaaye, maxaad isaga dhigtaa inaad kaligaa magaalada gaari ka wadatid. Hadalladaas iyo kuwo la halmaala Soomaalida un bay isugu yimaadaan. Boqolaal Soomaali ah buu dayn ku leeyahay, isiiya hadduu yiraahdana Bishu hadhamaato iyo aakhiru miishaar baa lagu jiraa kama daayaan.
Marar Badan waxa uu jabiyay sharciga waddada, dhowr jeer waxa uu galay shil uu khaladka isagu lahaa. Boolisku tiro labo jeer ah waa ay u digeen. Mar saddexaad haddii uu galana waxa ay u sheegeen inay kala noqon doonaan ruqsadda gaari wadidda. Isna haye iyo hawraasan buu yiraahdaa mar walba. Xilli galab ah isagoo deg-degsan gaarigana xoog ula xawaaraynaya ayuu ku dhuftay caruur iskuul ka soobaxay. Mid yaroo lix jira buu lugta bidix digada iyo dambaska ka dhigay. Waaw¦ waaw¦ waaw­-dii anbalaasta iyo gaawaridii booliska intuu ku bakaday dhan uu u socdo iyo dhan uu ka yimidna garan waayay buu gaarigii tukaan laga adeeganayay oo aan ka fogayn goobtii shilkii hore ka dhacay la galay. Booliskii oo awalba u soo socda baa sii dafay. Sal-dhiggii booliskii goortii la geeyay oo in la waraysto la maagay Waa uu khalkhalay oo isku dhexyaacay, hadalkiisu hakad male. Waxaa lagu xukumay sanad xarig ah iyo xoogaa lacag ah. Qolka uu ku xiran yahay maalintii afar jeer baa loogu soo galaa, saddex jeer cunnaa loo keena, marna dhakhtar qaabilsan dadka xanuunada dhimirka qaba baa u yimaada. Kun iyo kow jeer waxa uu u sheegay in uusan waalnayn oo uu isaga ka caafimaad badan yahay, dhowr jeer inuu gacan u qaado buu ku sigtay, mar walba shaqaalahaa ka soo gaara. Dhakhtarkuna lacag buu ku qaatooyoo, mar walba oo ay waydiiyaan qolyaha meesha haysta xaaladda Sugulle waxa uu yiraahdaa Saakuu u darnaa intuu meesha joogay. Kasii darid mooyee kasoo rayn male. Muddo sanad ah haddii uu xirnaa, xaaladdiisa caafimaadna ay qiimeeyeen waa ay iska soo siidaayeen. Waxa ay soo siiyeen warqad cadaynaysa inuu miyir-qabo. Subax iyo galab walba si loogu hayay waad waalantahay, hadda oo uu banaanka joogo waxa uu ku suganyahay xaalad waali iyo miyir qab u dhaxaysa. Faruhuu taag-taagayaa oo waa uu is lahadlayaa waxa uu leeyahay Ma waalni haa ma waalni, dadka haloo sheego. Booliskaa og inaanan waalnayn!
Shan-karoon waxaa u jooga shan caruur ah, waa ay shaqayn jirtay oo caruurteeda iyadaa u qaraaban jirtay. Waxa ay u shaqan jirtay shirkad. Shaqadeedu waxa ay ahayd xisaabiye. Hadda shaqadii ma ay hayso oo waa laga rookeeyay. Dhowr jeer oo soo daahitaan looga digay, waxaa ugu darsamay inaysan isbuuc cagaha dhigin goobtii shaqada. Haa waa run ma aysan tagin isbuuc oo gar bay u lahayd. Isbuucaas waxaa isugu darsamay ciidan laaan iyo cudur caruurta mid kood ku dhacay. Waa ay wacday goobtii shaqada dhowr jeer balse wax jixin-jixa looma muujin. Ugu danbaynna shaqadii waa laga eryay. Hadda waa guri joog oo caruurteeda dhanna uma dhaafto. Iyada iyo Sugulle afar iyo labaaatanka saac waa ay is haystaan. Orod shaqa tag guriga ha dhex taagnaanninee. Lacagta ay dawladdu siiso caruurta nagu ma filnee, orod oo naf is gali, oo bal dhaq-dhaqaaq samee fadhiga wax kuugu imaan mayaane. Intaasi waa hadallo dhagaha Sugulle ay soo tufeen maalin walba mar iyo marar badan baa lagu dhahaa. Dhowr jeer gacan buu u qaaday iyaduna booliskaan wacayaa iyo waa danbe gurigaan u soo hoyan maysid bay wacad ku martaa. Saaka gurgii Sugulle waxaa hor dhooban gawaaridii booliska. Waxaa u yeeray Shan-karoon, oo maxay ugu yeeri wayday soo gacan kama uusan jabin la qaadku. Alla! Ma shan-karoontiisii buu gacan ka jabiyay sharaftu haka haaddee. Waliba gacan kaliya maahee dhaawacyo kale baa u dheer. Boolisku waxa uu u sheegay inuu calaladiisa soo aruursado waa danbana aan lagu arag gurigaan agtiisa iyo agaariisa.
Sugulle oo balwadi baabiisay
Sidii xaafadiisa looga eryay waxa uu guda galay nolol rajo beel ah. Waxa uu si tartiib-tartiib ah u bilaabay balwaddii. Hal xabboo sigaara buu ku bilaabay. Xabaddaas sigaarka ah waa uu qarsadaa, markuu cabbana waa uu qoomameeya. Dhowr saac markuu joogaba xiisihii xaraaraddaa ku xoogaysta haddana xabad kaluu shitaa. Mudduu saas ku jiray. Waayadan danbase xabad sigaar ahi xaraaradda kama jabiso, dhowr xabuu nus saac wax ka yar ku cabbaa. Haddii markii hore ay taksiilayaasha saaxiibbo ahaayeen hadda isma yaqaannaan. Asxaabtiisii waa uu badalay, haa cajaladda dhanka kaluu u rogay. Habeennadaan waxa uu u hoydaa guri duul baay ay joogaan. Waa rag iyo haween, qol wayn bay deggenyihiin, waa ay is dhex seexdaan waxba uma kala qarsoona, waxna ma kala laha. Dharka, khamriga, xashiis-ka iyo irbadaha daroogada waa ay wadagaan. Maalintii oo dhan waa ay hurdaan, hurdo lama oran karee sidii maydkii bay meel yaalaan. Makhribkii bay magaalada u soo baxaan, waaberigiina waa ay soo hoydaan. Sugulle maalin kasta cashar hor leh buu bartaa. Tani sarkhaan badan ma le, oo taas baa ka wanaagsan. Irbaddaan xididdada yar yar baa la isaga duraa. Khamrigaas baa ugu sarkhaan badan walow uu qaali yahay intaas waxa ku tiri gabar dhalo khamri ah gacanta ku haysatay oo meel u dhow fadhiday.
Sugulle waa uu is adkaynayay dhowr isbuuc oo uu la joogay saaxiibadiis. Dhadhami, war hal mar kabbo ilaahay nin raguu kaa dhigaye. Sigaar un baad intaa afka ku haysaa. Dhoorre Alla maxaad khashiin tahay war hoo irbaddaan hal mar xididka ka qaado. Intaas iyo in la mid ah bay ku yiraahdaan har iyo habeenba. Saaka waa markii ugu horaysay uu oo dhalo khamri ah gacanta ku qabto. Saaxiibadii oo meel aan ka fogayn fadhiya baa kusoo wada jeeda.waxa ay leeyihiin Dee furoo cab. Alla! Alla! Waa uu furay, war kabbo dee, haa hadduu kabbanayaa u dhawee afka. Kabbay! Kabbay! Kabbay!¦.. Aaa aar waa uu kasoo celiyay afka. Kan muxuu ahaa waxaba sun buu u qabaayee. Mar dhaladuu furaa marna waa uu xiraa; mar afkuu u dhaweeya haddana kala soo noqdaa. Indhuhuu isku qabsaday oo haddana kala furay, mar buu kabaday haddana mar labaad u celiyay, dhaladii buu afka saaray oo qur-quriyay . Hoogga! Hoogga! War ka qabta¦ war ka qabta¦ Alla beerkiisuu ma tagi doonaa kani!
Sugulle waxa uu cagta saaray wado mugdi iyo musbaarro badan. Awal hadduu sigaar cabbi jiray hadda xasiish buu cunaa. Khamri cabbidiisii waa ay badatay oo saaxiibadii buu faro dheer yahay. Waa Laga baray laga badi. Isagu ma gatee tay soo gataan buu la cabbaa, xashiish kana waa uu la cunaa marna ka xadaa. Dhowr dhaluu maalintii cabbaa. Waxa uu noqday kharash soconaya. Waa ay karheen oo naceen. Dhowr jeer oo ay guriga ka eryeen toban bari kadib waa uu soo noqday. Iyagoo maqan ama hurda buu guriga yimaadaa oo waxa xashiish, khamri iyo daroogo taal aruursadaa. Iyaguna magaaladay ka baadi goobaan, isna waa uu iska ilaaliya. Markuu soconayo dhinacyaduu jeedaaliyaa, horay iyo gadaal buu iska fiiriyaa. Hadday arkaan way eryadaan, isna caguhuu wax ka dayaa.
Sannado badan buu ingiriiska joogay, oo dhanna uusan u dhaafin. hadda cag ma dhigo. Yurub buu sida marawaxaddii ugu dhex wareegaa, oo muxuu ugu dhex wareegi waayay soo nin shaqo haya ma aha. Haa shaquu hayaa oo qolyuu daroogada la gadaa. Waddamada Yurub ku yaal miduun tagin ma jiro. Kuwo Soomaalidu aysan joogin haddii ay joogtana aysan ku badnayn buu cagaha soo mariyay. Portugal iyo Spain waa uu ka soo waramay. Yurub maagaalo magaaluu u kala yaqaan. Xuduuddahoodu intay isu jiraa iyo meelaha sida fudud looga galo balaayuu ku qabaa. Waddan walba danbi buu kaga jiraa. In la xiro bishii dhowr jeer ceebtiisa maahee waa caadadiisa.
Guyaal iyo guyaal badan oo uu sarkhaan iyo sakaraad ahaa saakaa loogu qaata. Oo maxaa saaka iska badalay? Dee waa isagii xaloo dhan fakarayay oo marba qorshe dajinayay Ninyahow horta nin wayn baad noqotay, saan talo maaha toban sano baad sarkhaansanayd. Waa inaan isbadal aan innaba caadi ahayn sameeyaa. Maalinkii dhawayd horta muxuu i yiri odaygii dhakhtark ahaa? Beerkaaga dhaawac baa ku yaal haddii aadan joojin khamri cabista badan dhowr sano sii noo laan maysid aa!!. Tolow caruurtii aan dhalay iyo hooyadood ma noolyihiin? Maa aqaan toban sano maba aragee maxaan ka garan dee. Berri waa inaan tagaa goobihii Soomaalidu isugu imaan jirtay. Sax waa inaan tagaa. Dhammaan maan-dooriyaha wax sheegta waa inaan faraha ka qaadaa oo aan mar danbe agtiisa marin. Intaas iyo in kaloo badan waxa ay ka mid yihiin hadalladii uu xaloo dhan naftiisa ku waaninayay.
Saaka waa uu jarmaaday, waxa uu u socdaa goobihii Soomaalidu u badnayd. Waydiimo uu ogyahay in la waydiin doono buu warcelintoodii sii diyaarsanayaa. Waa uu luudayaa ilayn nin socon karaya maahee. Oo sidee buu u socon karaa saakaba irabaddii iskuma uusan dhufane. Waa uu qabatimay daroogada saakase waa uu is diidsiinaya. Waxa uu soo jiitamo oo hadba meel soo istaago ugu danbayn meharadihii Soomaalidu dhoobnaan jirtay buu soo dhex istagay. Ciduu garto iyo cid garata waa uu ka waayay meesha. Dadkani waxa ay wadanka soo galeen tobankii sano ee uu aduunka ka maqnaa, aakhirana uu ka sokeeyay. Waxa meel aan fogayn uga muuqday nin uu garanyo. U dhaqaaq dhankiisii oo u sii dhawaa ugu danbaynna waa uu hor istaagay. Waryaahee dhalada nooga bayr aan kaa daawannee, war muxuu ahaa axadkaan naanaaban! Hayaay! War waa Sugulle. Allay lehe waa in istaagga lagu salaamo war bal laabta I gali, oo haddana I gali. War kabal-yeeriyow waar bal ninyow koob shaaxoo dheer la soo carar ninkaan caajis baa ka muuqdee wahabku haka kacee. Intuu shaaxa cabayay waxaa u yimid dhowr nin oo kale oo uu bar garanayo.
War xagee jirijirtay? Waryaa Sugulle war dee timihii goormay kaa bideen? Waa wareey! War iligba kugu ma yaale. Mid meesha fadhiyay oo indha gor-gor lahaa baa waydiimahaa sidii warankii wadnaha uga wab siiyay. Isna warcelintu waa u diyaar. War ninmanyahow la idiin waran. Horta waxa aan ku maqnaa Sucuudiga tobankii sanoo danbe , oo waan ka shaqayn jiray, kow dhaha. Bidaartaa ii soo hartay. Dee adeerayaal nin ragaa bidaar le, dee ordaya soo ka xeeya islaan bidaar le. Ilkahaagii aawaye baad leedihiin. Allow nimaan Sacuudi arag!! War meesha waxaa ka baxa bahal timir layiraahdoo macaan oo miid ah, anna waligayba oon kale afkayga ma saarin, oo macaankii baa ilkiha eber iga dhigay. Ilko iyo tima un baad fiirinaysaane, adeerayaal sanad walba waan xajin jiray, cumradu iyadu xisaab male. Shanta salaadood masjidka nabiga NNKH baan ku tukan jiray. Dee intee jeer baan ka addimay. Bal ii waran warfaayow adigaan daris ahayne, waagii isugu kaaya danbysay. War Sugullow warku waa intaa haysid, oo dee waa iyadii xaaskaagii iyo saddexdii yaryaraa shilka gaari ku dhinteen. Gabadhii curadda ahaydna waa iyadii ninka Afrikaan ka ah guursatay. Dabadeed kala tageen. Hadda laba adoon oo mad-madow oo yar yara baa u jooga. Istaaqfurulaah adoomo maahee waa caruurtii aad awoowga u ahayd. Gabadhii kalana waa iyadii waalatay markay shilkii caruurta iyo hooyadood maqashay. Oo iminka dadka xanuunada dhimirka qaba meel lagu hayo bay ku jirta.
Sugulle waa baas oo balo wataa u baryay, talo-na farahiisa waa ka baxday. Caruur mahayo, caafimaad ma hayo, ceeryaamo murugeed baa calan ul ushay. Ingiriiska waa inaan isaga tagaa, wadankii waa inaan u noqdaa. Oo maxaa wadankii iiga horeeya? Waa inaan wadankii shaqo u raadsado. Haa waa inaan caqli keenaa. Horta magaca Soomaaliya oo aan ku dhawaaqo goormaa iigu danbaysay. Soomaaliya¦ Soomaaliya¦ Soomaaliya.. yaah!! War dee magacu see yahay. Balaayooy!. Xoogaa lacag ah waa uu haystaa. Ma badna se. lacagtiisii tumasho iyo tamash laa u dhameeyay. Wadanka doorashaa ka dhicidoonta mar dhow soo maaha? Haa. Waa inaan musharrax iska dhigaa oo tolka iyo hayadaha shisheeye jaf-jaftaa, hadhowna waji kale la soo baxaa. Haaheey! Haddaan tubtii toosnayd cagta ku hayaa.
Odayaashii reer Qurac ay isla ahaayeen oo London joogay u waran. Iyaguna waxa ay u sheegeen inay hiil iyo hooba la garab istaagi doonaan. Haddaan reer qurac nahay waligayo madaxwayne-nimo umaan tartatamin, maanta aqoonyahkeennii dhiig is galiyay. Ina Masjid biiye baa musharrax ah soo maaha? Us war us Alle afka ku goo. Ina Masjid biiye ku ye. Adeer naanaystaa maanta wixii ka danbeeya yaan lagu oran musharraxa. Dadka hanaga didinina billaa calayk. Intaasi Waa qayb ka mid ah hadalladii reer Qurac.
Waxaa la sameeyay gudi dhaqaale uruurinta qaabilsan. Waxa ay u badan yihiin dhalin yaro aqoonyahanno ah. Hool wayn bay isugu keeneen hal-doorkii reer Qurac. Wadaad iyo waranle; aqoonyahan iyo ganacsade looma kala maqna madasha. Tol waa tolane. Halkii baa qaaraan la isku qoray yar iyo waynba; rag iyo dumarba. Soomaalidii kale ee London joogtayna iyagana hanti baa laga doonay. Oo see? Kumanaan soomaalidii ka mid ah baa hool loogu yeeray. Wadaad reer Qurac ah baa hawsha agaasinkeeda wata. Mawduuca laga hadlayo caawa waa abaaro wadankii ku dhuftay iyo dugsiyo qaybo wadankii ka mid laga dhisayo. Dadku haka qayb qaataan buu yiri Unaxariista kuwa dhulka jooga sammada ha la idiinkaga naxariistee intaas buu ku cel-celinayaa wadaadkii. Dadkii qiiro iyo qarracan baa ka muuqda. War igu qor intaas aniga War anna intaas in leeg igu qor. Islaanta kaliyoo siliska dahabka ah intay luqunteeda kasoo furto oranaysa, war iigu dar sadaqada ilaahay igama reebee iyo gabadhaha faraantiyadooda siibaya yaab baa ku dilaya!.
Sugulle lacag xoog le buu kala tagay London. Dubai jaaliyaddii joogtay wax bay isugu dar-dareen iyaguna. Nairobi buu yimid. Nairobi iyada lacag ka uu rajayn mayo ee isagaa lacag laga rabaa. Waxa uu kireeyay hotel, waxaa la sameeyay qado, sidoo kale waxa la martiqaaday qaybihii Soomaalida. Maalintaas waxa la cunay bahal qado ah oo kala qaadan gabigeeduba. Halkaas waxa uu uga dhawaaqay musharrax-nimadiisii. Waxa uu warqad ka akhriyay khudbad dadka quluubtooda gilgishay. Dhalinyaradu xaggiisa waa ay isku ciriiriyeen Hoo sawir nugu dhufo aniga iyo musharraxa. Musharrax ninkani waa gudoomiyihii rugta ganacsiga Soomaalida, sawir inuu kula galo buu doonayaa. war mushrraxa waa uu daalanyahay, hawlo badanna waa sugayaane mashquulka ka daaya. Intii uu Nairobi joogay waxa uu la kulmay qaar ka mid ah hayadaha ummuuraha Soomaaliya waalaaqoo daba gaddiya. Isaga waa la hagayaa oo rag qaraabadiisa ah oo siyaasadda Soomaaliya aan waligood lug kala bixin baa warqdo u qora. Sugulle markii aad la kulantid islaanta haysata hayaddaas laba mawduuc kala hadal? Oo maxay yihiin labadaasi. Alla maxay ilma adeertay ila shaqaynayaan. Waxa aad kala hadashaa Qoondada haweenka ee dhanka siyaadda iyo dhibaatada gudniinka fircooniga ah. Sidoo kale ha ilaawin ereyada Gender balance iyo power sharing. Inaad ku celcelisid.
Subaxdii danbe waxa uu u soo duulay Muqdisho. Garoonka diyaaradaha saan innaba caadi ahayn baa loogu soo dhaweeyay. Magaalada waxaa ku yaal boorar uu sawirkiisu ku dhaganyahay. Sawirka hoostiisa waxaa ku qoran Ku dooro musharrax Sugulle Salaad Samatar “ Nabad, caddaalad iyo horumar . Waxaa loo sii galbiyay hotel loogu tala galay. Waxa uu leeyahay istaaf u gaar ah oo ku hareeraysan, goor walba iyo goob kasta. Mobile-kiisa ma uu qabto ee waa loo qabtaa Mudane lambar baa kusoo wacaye, fursan aad kula hadashid ma haysaa? Cunnada inta uusan cunin waa laga dhadhamiyaa. Cadawgu waa badan yahay bay ku andacoodaan kuwa cunnada dhadhamiya. maanta waxa uu la balansanyahay 10:00 barqanimo odayaasha beeshiisa sidoo kale 11:00am waxa ay balansanyihiin dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxday ee wadanka jooga. Kulankii hore hadduu bilowdayba, cabbaarna la is waraytay waa uu hadlay Adeerayaalow ninka ragga libintiisa in la siiyo baa wanaagsan. Barigii dhawayd oo ay baraagahii ku yiil Rays-dheer nagu qabsadeen kuwii xumaaye reer Qansax ahaa, deedna aan islaynay. Waxa aan ahaa ninkii sida fiinta London dhexdeeda ugu qayliyay, oo tolka qaaraankii rasaasta lagu gadi lahaa ka soo aruuriyay. Oday is hayn waayay baa yiri Alla muxuu wiil-hoog yahay, walle xinniyaa gubaya kan. War Sugulle, odaygii aabahaa ahaa marka aanu ka sheekaysanayno waxa aanu oran jirnay waa mas abur dhalay, balse maantay noo cadaatay inuu yahay mas mas dhaly.
Saacad kadib waxa uu la kulmay dhalintii jaamacadaha. waxa ay iska waraysteen xaaladda wadanku marayo iyo dhibaayinka haysta. Khudbad dheer oo uu u jeediyay waxaa ka mid ahaa Waxa aan idiin balanqadayaa haddii aan ku guulaysto madaxtinimad dalka in qof walba oo idin ka mid ah uu helayo shaqo ku habboon. Wadankayaga waxa dib u dhigay waa qabyaalad iyo nin jeclaysi. Qabiilka iyo qurunka waanu ka gudbaynaa. War soo saa maaha. Haa waa saa.. haa waa saa¦ sacab baa xigay dhac¦ dhac¦ dhac¦ dhac. Maalintii doorashada la qaban lahaa markii ay ka dhimantahay laba bari, ayuu si dhuumasho ah Muqdisho uga duulay. Lacagta uu haysto ilaahay un baa xisaabteeda yaqaan. Malaayiin iyo malaayiin doolar baa akoonada ugu jira waxa ay kasoo galeen ololihii doorashada. Inta badan ganacsato ciddiisa ah baa bixisay. Goortii uu jaran jarada diyaaradda fuulayay waxa uu ku celcelinayay War maxay odayadii lahaayeen maalinkii dhawayd- Mas mas dhalay baa tahay aa!! Yaahuu war kuwaas ma i habaarayeen. Lacagtaan ugu horayn waa inaan isaga daaweeyaa kansarkii beerka la iiga sheegay. Soomaaliyay ku leeyihiin madaxwayne ka noqo, haddaan beerka ka xanuusanahaye, ma waxay rabaan inaan dhiigkar iyo sonkor u dhinto. Markii ay reer Qurac maqleen inuu ninkii baxsaday lacag raadisna uu ahaa. Waxa ay bilaabeen inay Alla bariyo dhigaan lagu habaarayo Sugulle. Allow cuqubo ku rid Allow fartuu qaadaba jabi. Allow xoolaha dadow ka mataji. Ilaahayow inta cudur dunida taal kuwada rid. Waxaa wacay maalin nin gacan-yare u ahaan jiray waaguu musharraxa ahaa waxa uu yiri War tolkaa yar iyo waynba waa ay ku soo habaareen, cuqubaana kugu soo socota. Sugulle oo qoslaya waxa uu yir War toban sanaa cuqubo i haysatay, oo beerkaygaan matagi jiray mar mar. Cuqubadii igu dhici lahayd waa ay ii soo hormartay. Haddana maalmahaygii baan ku jiraa!.
← Ciqaabta Eebbe & dunuubta dadka !
Cudurka iska daawee! →
Kulankii aniga iyo Carabkii hantiilaha ahaa!
May 22, 2017 Cabdullaahi Muuse 0
August 9, 2017 Burhan Mohammed 0
November 2, 2017 Abdi J Arab 0